Let's Flight Ghost ( 2016 ) - မြန်မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel July 18, 2016
ဒီကား​လေးက​တော့ 2016 July မှာ မှ ထွက်​ရှိလာတဲ့ အသစ်​စက်​စက်​ ဇာတ်​လမ်းတွဲ​လေးပါ ...
ဇာတ်​လမ်းအမျိုးအစားက​တော့ Horror , Supernatural , Comedy , Romance ပုံစံ​လေးပါ ...
Main Actor က​တော့ ​တောင်​ကိုရီးယားမှ K Pop band တစ်​ခုဖြစ်​တဲ့ 2PM အဖွဲ့က
Main Rapper " Ok Taec Yeon " ပါ ...
အားလုံး ကြည့်​ဖူးလိမ့်​မယ်​လို့လဲ ထင်​မိတဲ့ Dream High ဇာတ်​လမ်းတွဲထဲ မင်းသားတ​ယောက်​ပါ ...
Main Actress က​တော့ အသက်​ ၁၇ နှစ်​သာ ရှိ​သေးတဲ့ Kim So-Hyun ပါ ...
ကင်​အွန်​ဂျီ ဟာ လူ့ဘဝက ဘယ်​ပုံဘယ်​နည်းနဲ့ ​သေခဲ့မှန်းမသိပဲ ဝိဥာဉ်​ဘဝသို့ ​ရောက်​ရှိ​နေရရှာပါတယ်​ ..
မင်းသား ပတ်​ဘုံပဲ က​တော့ ဝိဥာဉ်​​တွေ သရဲ​တွေကို မြင်​နိုင်​တဲ့ အစွမ်းသတ္တိ ပိုင်​ဆိုင်​ထားတဲ့ တ​ယောက်​ပါ
ထိုအစွမ်းကိုအသုံးချပြီး သရဲနှိမ်​နင်းတဲ့ ဆရာ တ​ယောက်​အဖြစ်​ လုပ်​ကိုင်​ကာ ဝင်​​ငွေရှာ​နေသူတစ်​ဦးပါ ...
တစ်​​နေ့​တော့ ပတ်​ဘုံပဲထံ သရဲနှိမ်​နင်း​ပေးရန်​ ​တောင်းဆိုလာသည့်​ Mail တစ်​​စောင်​ ​ရောက်​ရှိလာခဲ့ပါတယ်
ထိုMail က ဝိဥာဉ်​ဖြစ်​​နေတဲ့ ကင်​အွန်​ဂျီ က ပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်​ပြီး သူမ ​ကြောက်​ရတယ့်​ သရဲအား နှိမ်​နင်း​ပေးဖို့ပါ
အတိတ်​ဘဝက ဘယ်​ပုံဘယ်​နည်းနဲ့ ​သေဆုံးခဲ့မှန်းမသိတဲ့ ကင်​အွန်​ဂျီ တ​ယောက်​
မထင်​မှတ်​ပဲ မ​တော်​တဆ ဖြစ်​ခဲ့မိတဲ့ ပတ်​ဘုံပဲ ဆီမှ အနမ်းတပွင့်​​ကြောင့့် သူမရဲ့အတိတ်​ဘဝကို
ခပ်​​ရေး​ရေး​လေး ပြန်​မြင်​​ယောင်​မိလာခဲ့ပါတယ်​ ..
ထို့​နောက်​ သူမ အတိတ်​ဘဝကို အလုံးစုံ မှတ်​မိ​လာ​စေရန်​ ဘယ်​လိုကြိုးပမ်းမလဲ ?
ပတ်​ဘုံပဲ က​ရော သရဲ​တွေကို ဘယ်​လိုပုံစံမျိုးနဲ့ နှိမ်​နင်းမလဲ ?
ကင်​အွန်​ဂျီ တ​ယောက်​​ရော အတိတ်​ဘဝကို ပြန်​မှတ်​မိသွားနိုင်​ပါ့မလား ? ဆိုတာ​ကို​တော့
ဇာတ်​လမ်း​​လေးကို ကြည့်​ရှုပြီး ခံစား​ပေးပါဦးဗျာ ...
Rating အ​နေနဲ့က​တော့ My Asian TV မှာ 9.5/10 ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်​လမ်း​ကောင်း​လေးတစ်​ခုပါ ..
Genre : Comedy , Horror , Manga , Romance , Supernatural
Translator : Lily
Comedy Horror Korea Manga Romance Supernatural
Labels: Comedy Horror Korea Manga Romance Supernatural
ever gipsy August 2, 2016 at 1:16 AM
Mickey Boomix August 2, 2016 at 6:11 AM
Unknown August 2, 2016 at 8:55 AM
thazin soe August 2, 2016 at 8:56 AM
naruto hinata August 2, 2016 at 10:02 AM
phone pyae sone August 4, 2016 at 10:22 PM
Mg Thet August 7, 2016 at 2:02 PM
အသစ် က ရှာမတွေ့သေးဘူး အရမ်း ကောင်းလို့ စာတန်းထိုးမပါလည်း ကြည့်မယ်ဆိုပြီးရှာတာ မတွေ့သေးဘူး
Mg Thet August 7, 2016 at 2:20 PM
16ပိုင်း တစ်ရက်တစ်ပိုင်း ၈လပိုင်း တစ်လ လုံးစောင့်ကြည့်ပါ့မယ်ဗျာ နောက်မကြစေပဲ တင်ပေးပါလို့
kositt paing August 9, 2016 at 2:51 AM
Aung Wai Lwin KMH August 9, 2016 at 11:17 PM
naing ye August 23, 2016 at 12:09 AM
naing ye August 23, 2016 at 6:59 AM
SawEh Sur August 29, 2016 at 11:54 PM
အပိုင်း၁၅ အခုထွက်​ပြီ​လေ အမြန်း​လေ တင်​​ပေးပါဦ မြန်​မာစာတန်းထို​လေး ​ကျေးဇူးပြု၍
thaw August 30, 2016 at 9:18 PM
အပိုင်း ၁၅ နဲ့ ၁၆ ကို စောင့်နေလျက်ပါရှင့် တချက်တင်ပေးပါဦးနေုာ်
Mty Mika August 31, 2016 at 5:56 PM
waiting for epi 15 & 16 please upload Mr & Ms admin... plz :D
epi5ko other download site nae tin pay per lar
down loe ma ya phu